“နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနှင့် CROWN Education တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် “နိုင်ငံတကာပညာရေးပြပွဲ(၂၀၁၆)” ကျင်းပမည်” မြန်မာနုိုင်ငံမှကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့် နုိုင်ငံတကာပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားသည့်မိဘများ၊ကျောင်းသူ/သားများအတွက် အမေရိကန်၊သြစတြေလျ၊အင်္ဂလန်၊စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း နုိုင်ငံတို့မှ တက္ကသိုလ်ပေါင်း (၁ဝဝ)ကျော်၏ သတင်းအချက်အလက်များရရယူနိုင်မည့် “နိုင်ငံတကာပညာရေးပြပွဲ ၂၀၁၆” ကို၊ ရန်ကုန်မြို့ အလုံလမ်းရှိ၊ Summit Parkview Hotel... Read more... "အမေရိကန်၊သြစတြေလျ၊ အင်္ဂလန်၊စင်္ကာပူတက္ကသိုလ်များ တွင်ပညာသင်ယူရန်ကုန်ကျစရိတ်များပညာသင်အခွင့်အလမ်း များအကြောင်းCROWN Education မန္တလေးရုံးခန်းတွင် လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါပြီ" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ယခုအခါ အမေရိကန်ကောလိပ်များတွင် တစ်နှစ်ပညာသင်ကုန်ကျစရိတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၃ဝဝ) ကျော်သာကုန်ကျပြီးAssociate Degree ရရှိရန် (၂)နှစ်သာကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။.ထို့အတူ သြစတြေလျ၊ အင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် မြန်မာ(၁ဝ)တန်းအောင်လက်မှတ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်လျောက်ထားနိုင်သည့်တက္ကသိုလ်များ၊နိုင်ငံတကာတွင် ဆေးတက္ကသိုလ်တက်ရောက်မည်ဆိုပါက၊ မှ... Read more... "ဆယ်တန်းဖြေဆိုထားသောကျောင်းသူကျောင်းသားများ ဗဟုသုတရစေနိုင်မည့် ..အင်ဂျင်နီယာ, IT, စီးပွားရေး နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဘွဲ့များ,Life Science, Medical Science ဘွဲ့များအကြောင်းမိတ်ဆက်ဟောပြောပွဲ" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆယ်တန်းဖြေဆိုထားသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် အဆင့်မြင့်ပညာဆက်လက်သင်ယူရာတွင်မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်စေရန် ဘာသာရပ်များအကြောင်းသိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းတွင်ပညာသင်ယူသည်ဖြစ်စေတစ်ချိန်ပြည်ပတွင်ဆက်လက်ပညာသင်ယူရန်ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့ရွေးချယ်မည့်ဘာသာရပ်၊ ပညာရေးလမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍... Read more... "မြန်မာနုိုင်ငံမှ ‪#‎HND‬ ကျောင်းသားများအတွက် အင်္ဂလန် သြစတြေ လျတို့မှပေးအပ်မည့်ဘွဲ့များနှင့်ပတ်သက်၍ ရွေးချယ်စရာပညာရေး အခွင့်အလမ်းများကို ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ပေးမည်" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ‪ #‎အင်္ဂလန်‬၊သြစတြေးလျ#BE ဘွဲ့တွေကို ၅၀ % နှုန်းစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်သင်ယူနိုင်မယ့် ပညာရေးလမ်းကြောင်းများ.‪#‎AGTI‬, ‪#‎BTech‬, #HND Electrical/Business ကျောင်းသားများအတွက်(၁၆) လအတွင်း သင်ယူနိုင်မည့် အင်္ဂလန်ဘွဲ့များအကြောင်း…■ ■ ■ ■ ■ရန်ကုန်■ ■ ■ ■ ■❑ နေ့ရက် - မေ(၇)ရက်၊စနေနေ့၊❑ အချိန် - မွန်းလွဲ (၂ ) နာရီမှ... Read more... "(၁ဝ)တန်းဖြေဆိုထားသူများ အမှတ်နဲ့ မခွဲတော့ပဲကိုယ်စိတ် ကြိုက်ဘာသာရပ်တွေကိုဘယ်နှစ်ကစပြီးလျောက်ထားနုိုင်မလဲ? ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်လဲ?(မန္တလေးဟောပြောပွဲ)" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ✅ ပြည်တွင်းအစိုးရတက္ကသိုလ်တွေကို တက်မယ်ဆို ဘာသာရပ်အရွေးမမှားရအောင်ဘယ်လိုရွေးမလဲ✅ မြန်မာကျောင်းသားများ၏ တက္ကသိုလ်ပညာရေးအတွက်ခေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနှင့်ဘာသာရပ်ရွေးချယ်နိုင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာများအကြောင်း✅ ပြည်ပမှာကျောင်းတက်ဖို့ iGCSE, GCE ‘A’ , SAT တွေကို ဘယ်အချိန်မှာပြင်ဆင်သင့်သလဲ.❑ မန္တလေး❑ နေ့ရက်... Read more... "(၁ဝ)တန်းဖြေဆိုထားသူများနှင့် အောင်မြင်ထားသူများဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်လဲ?(မန္တလေးဟောပြောပွဲ)" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာနိုင်ငံမှ (၁ဝ)တန်းဖြေဆိုထားသူများ၊ အောင်မြင်ထားသူများကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သည့် အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍CROWN Education မှ ပညာရေး အတိုင်ပင်ခံ ဦးအောင်ကျော်ဆန်းနှင့်အတူ James Cook University,PSB Academy, Kaplan မှတာဝန်ရှိသူများက ဆွေးနွေးပေးပါမည်။.တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုထားသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်... Read more... "မြန်မာ့ပညာရေးအနာဂါတ်အလားအလာနှင့် နိုင်ငံတကာပညာရေး အခွင့်အလမ်းသစ်များ(မန္တလေးဟောပြောပွဲ)" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာ့ပညာရေးအနာဂါတ် အလားအလာနှင့် နိုင်ငံတကာ ပညာရေးအခွင့်အလမ်းသစ်များ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် CROWN Education မှ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ဦးအောင်ကျော်ဆန်းနှင့်အတူ James Cook University,PSB Academy, Kaplan မှတာဝန်ရှိသူများက ဆွေးနွေးပေးပါမည်။.တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုထားသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်... Read more... Pages« first